အေးခဲနေသောအနောက်နိုင်ငံကနိုင်ငံများ……….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Copy/Paste » အေးခဲနေသောအနောက်နိုင်ငံကနိုင်ငံများ………..	1
Posted by သျှားသက်မာန် on Jan 10, 2017 in Copy/Paste | 1 comment
PS : တစ်နေ့ နေ့ တော့ရောက်အောင်သွားမှပါလေ….
Thint Aye Yeik says: အိုဘယ့်…. မရောက်သေးတဲ့ပိုစ့်